Jose oo beegsanaya Rikoodhka Fergusen ee Champions League
Friday, July 20th, 2018 - 00:03:21
Thursday September 07, 2017 - 09:06:18 in Wararka by Kubad Bile
Jose Mourinho ayaa isku dayaayo rikoorka Sir Alex Ferguson ee Manchester United xilli uu ka hadlaaye soo laabashadooda Champions League.
Mourinho ayaa sameeystay laftiisa bartilmaameedyo badan tan iyo Markuu yimid Old Trafford xagaagii hore asiga oo hada qiray in qorshahiisa yahay inuu sameeyaa rikooro cusub oo hore uu dhigay macalinka halyeeyga ah ee Kooxda waqtiga badan joogay Sir Alex Ferguson oo saaxiibo dhaw ay yihiin.
26-kii sano ee uu joogay macalinkii hore ee United Sir Alex Ferguson ayuu dhigay rikooro badan oo cajiib ah balse qof walbo oo dooneeyso inay jabisaa waa inay waqti badan bixisaa. Balse hada Jose ayaa doonaayo inuu jabiyaa rikoorka Sir Alex ee macalinka ugu kulamada badan Champions League.
Mourinho ayaa ka soo muuqday 133 kulan Koobkaan asiga oo labo jeer ku guuleestay asiga oo FC Porto 2004 iyo Inter Milan 2010-kii u qaaday. Sir Alex ayaa asigana qaaday Koobkaan labo jeer 1999 iyo 2008waayihiisii dheeraa asiga oo macalin soo noqday in ka badan 133-da jeer ee Jose 61 jeer.
United ayaa ku soo laabaneeyso Champions League mar kale ayadoo uu Jose heesto fursad uu Koobkaan mar kale iyo Koox kale kula guuleeysan karo.
"Habeenka Champions League waa mid cajiib ah, waxaan heestaa ciyaartooy aan wali safan Koobkaas, waxaa ay u noqon doontaa cajiib ayaga in Kooxdaan ay ku laabataa Koobkaan ayagoo 3 jeer ku dheeli doono Old Trafford oo ay joogaan qaarkood waalidkood oo Kooxdaan taageero buuxo u ah, waxaan u maleeynaa inay cajiib tahay sidaas."
United ayaa kulankeeda furitaanka la ciyaari doonta Kooxda Basle oo Old Trafford soo booqon doonto Talaadada.
Jose ayaa markii ugu horeeysay booqon doono Kooxdiiisii hore ee Benfica uusan wali isku arkin Yurub siduu uga soo tagay waloow uu Porto asiga oo macalin u ah ay gudaha Portugal ku soo wada ciyaareen.
W/D AK Caqil